Mayelana ne-Outlook Personal Folders (PST) File
Ikhaya > Imikhiqizo > DataNumen Outlook Repair > Mayelana ne-Outlook Personal Folders (PST) File
Ifayela lamafolda womuntu siqu, elinokwandiswa kwefayela le-.PST, lisetshenziswa yimikhiqizo yokuxhumana eyehlukile ye-Microsoft, kufaka phakathi iMicrosoft Exchange Client, i-Windows Messaging nazo zonke izinhlobo ze-Microsoft Outlook. I-PST isifinyezo se- "Personal Storage Table".
Kwi-Microsoft Outlook, zonke izinto, kufaka phakathi imiyalezo yemeyili, amafolda, kosts, ama-aphoyintimenti, izicelo zomhlangano, oxhumana nabo, uhlu lokusabalalisa, imisebenzi, izicelo zomsebenzi, amajenali, amanothi, njll. kugcinwa endaweni kufayela le-.pst elihambisanayo, okuvamise ukutholakala kufolda echazwe ngaphambilini.
OkweWindows 95, 98 kanye ME, ifolda yile:
idrayivu: WindowsApplication DataMicrosoftOutlook
idrayivu: Igama leWindowsProfilesuserIzilungiselelo ZendawoIdatha YokusebenzisaI-MicrosoftOutlook
Ye-Windows NT, 2000, XP ne-2003 server, ifolda yile:
idrayivu: Imibhalo negama lomsebenzisiIzilungiselelo ZendawoIdatha YokusebenzisaI-MicrosoftOutlook
idrayivu: Imibhalo negama lezisetshenziswaIgama LokusebenzisaI-MicrosoftOutlook
OkweWindows Vista noma 7, ifolda yile:
idrayivu: Igama lomsebenzisiAppDataLocalMicrosoftOutlook
OkweWindows 8, ifolda yile:
ukushayela: Abasebenzisi I-AppDataLocalMicrosoftOutlook
ukushayela: Abasebenzisi IyazulazulaLocalMicrosoftOutlook
Ungase futhi useshe ifayela elithi "Outlook.pst", igama elizenzakalelayo lefayela le-Outlook .pst, kukhompyutha yakho yangakini ukuthola indawo lefayela.
Ngaphezu kwalokho, ungashintsha indawo yefayela le-PST, wenze isipele sayo, noma wakhe amafayela amaningi we-PST ukugcina okuqukethwe okuhlukile.
Njengoba yonke imininingwane yakho yokuxhumana nolwazi kugcinwa kufayela le-PST, kubaluleke kakhulu kuwe. Lapho kuba onakaliswe ngezizathu ezahlukahlukene, sincoma kakhulu ukuthi usebenzise DataNumen Outlook Repair ukuthola yonke idatha ekuyo.
Izinguqulo zeMicrosoft Outlook 2002 nezangaphambilini zisebenzisa ifomethi yefayili ye-PST endala ene- umkhawulo kasayizi wefayela ongu-2GB, futhi isekela kuphela ukufaka umbhalo we-ANSI. Ifomethi yefayela elidala le-PST ibizwa nangokuthi ifomethi ye-ANSI PST ngokujwayelekile. Kusukela ku-Outlook 2003, kwethulwa ifomethi entsha yefayela le-PST, esekela amafayela amakhulu njengama-20GB (lo mkhawulo ungakhuphukela ku-33TB ngokuguqula irejista) ne-Unicode text encoding. Ifomethi entsha yefayela le-PST ibizwa ngefomethi ye-Unicode PST ngokuvamile. Kulula ukwenza lokho guqula amafayela e-PST asuka kufomethi endala ye-ANSI aye kufomethi entsha ye-Unicode nge DataNumen Outlook Repair.
Ifayela le-PST lingabethelwa nge-password ukuvikela imininingwane eyimfihlo ekulo. Noma kunjalo, kulula kakhulu ukukwenza ukusetshenziswa DataNumen Outlook Repair ukwephula ukuvikelwa ngaphandle kokudinga amaphasiwedi woqobo.